दाम्पत्य जीवनलाई सधैभरी अटुट अनि अम्मर मायाको साथ बटुलीरहने चाहाना छ भने यी कुरा त्याग्नुहोस ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
दाम्पत्य जीवनलाई सधैभरी अटुट अनि अम्मर मायाको साथ बटुलीरहने चाहाना छ भने यी कुरा त्याग्नुहोस !
सबै जोडीमा आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुखद् होस् भन्ने चाहाना हुन्छ । तर नचाहाँदा नचाँहादै पनि बैबाहिक जीवन भत्किन्छ र कैयौं जोडी छुट्टिन्छन् ।विवाह टुट्ने कारण केलाउने हो भने कुनै कुनै त साह्रै सामान्य कारण समेत सामने आउँछन् । कतिपय जोडीले चाल नै पाउँदैनन् कि उनीहरुबीच के समस्या थियो ।यहाँ बैबाहिक जीवनमा समस्या आउन लागेका संकेतबारे केही टिप्स दिइएको छ । जुन तपाइँलाई यस्ता समस्याबाट जोगिन सहयोगी बन्न सक्छ ।
विगतको विषयमा बढि कुराः जव जोडीहरु विगतका विषयमा बढी कुरा गर्छन् र एक अर्कालाई नाम काढेर बोलाउने वा गाली गर्ने तह सम्म उत्रन थाल्छन् तव बुझ्नु पर्छ कि सम्बन्धमा गम्भिर समस्या छ ।
झगडाः दम्पतिबीच सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा पनि झगडा हुन थाल्यो वा झगडाका लागि मात्र कारण खोज्न थाले भने उनीहरुको सम्बन्धको भविषय धरापमा छ ।
एकल निर्णयः दम्पतिमा राम्रो सम्बन्ध रहे सम्म एक अर्कालाई सोधेर सल्लाह गरेर निर्णय लिने हुन्छ । तर जव सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ तव एक्ला एक्लै निर्णय लिने र एक अर्कालाई सोध पुछ नै नगर्ने हुन थाल्छ । यस्तो हुन थाल्यो भने सम्झनुस् दाम्पत्य जीवन धरापमा छ । यसमा मुख्य भुमिका अहमको हुन्छ ।
इर्श्याः दम्पतिमा समान्यतया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर जव समस्या आउँछ तव एक अर्कालाई होच्याउने वा अर्काको प्रगतिबाट जल्ने समस्या देखिन थाल्छ । मुख्य समस्या त एक अर्कालाई विश्वास गर्न छोडिन्छ ।
परिवार भित्रै एक्लोः जव पार्टनरबीच राम्रो सम्बन्ध हुन्छ उनीहरुले परिवारलाई हाम्रो भन्छन् । तर समस्या आउन थालेपछि मेरो भन्ने भावना प्रधान हुँदै जान्छ जुन दाम्पत्य जीवनका लागि खतरनाक संकेत हो ।
छलछामः जव दम्पतिमा विश्वास हराउँदै जान्छ । अनि एक अर्कासँग झुट बोल्ने विवाहेत्तरका सम्बन्धमा आउने जस्ता समस्या देखिन्छन् । जव यस्तो कुरा सतहमा आउँछ त्यसपछि परिवार टुक्रिनुको विकल्प हुँदैन ।
सेक्समा उपेक्षाः जव जोडीबीच बैमनस्यता बढ्दै जान्छ । यौन सम्बन्ध गौण बन्छ । यसमा कुनै रस हुँदैन । यदी यौन गौण बन्न थाल्यो भने पनि बैबाहिक सम्बन्ध धरापमा पर्छ ।
सुल्झाउने भन्दा बल्झाउनेः राम्रो सम्बन्ध हुँदा दम्पतिमा सामान्य समस्या आए भने सुल्झाउनेप्रति ध्यान हुन्छ । तर जव एक अर्काप्रति तिक्तता बढी हुन्छ तव समस्याको समाधान भन्दा थप समस्या निम्ताउने प्रवत्ती बढी देखिन्छ । यो पनि दम्पतिका लागि घातक संकेत हो ।
सम्वादविहिनताः जोडीबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदा चाहिने भन्दा पनि बढि कुराकानी हुन्छ । तर सम्बन्ध विग्रन थालेपछि भने उनीहरुबीच अत्यावश्यक समयमा समेत सम्बाद हुन छाड्छ । जव सम्बादविहिनता बढ्दै जान्छ त्यसले सम्बन्ध अन्त्यतिर आइपुगेको डरलाग्दो संकेत मात्र गर्छ ।तर माथि उल्लेखित कुरामा समयमै ध्यान दिने हो भने चाँही समस्याको समाधान निस्कने र वैवाहिक जीवनमा नयाँ पन आउने सम्भावना रहन्छ ।
सरकारले नै रेलका यात्रुहरुलाई कन्डम बाँड्ने भन्दै सूचना निकालेपछि
राज्यद्वारा सञ्चालित भारतीय रेल सेवाले यात्रुहरुलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधन कण्डम र महिलाले प्रयोग गर्ने
१२ जेठ (रासस) – पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मस्र्याङदी गाउँपालिका–३ स्थित पर्यटकीय गाउँ सिउरुङमा तीन
यी हुन् संसारकै अनौठा यौन काण्डहरु
एजेन्सी । विश्व जति आधुनिक र खुला समाजमा परिणत हुँदै गएको छ त्यत्ति नै समाजमा
एजेन्सी । गर्भावस्थामा गर्भवती महिलालाई निकै हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । उनको स्वास्थ्य मात्रै होइन गर्भमा